Ugboro atọ (755nm / 808nm / 1064nm) diode laser machine na FDA na Medical CE ntutu mwepụ igwe
Ugboro atọ (755nm / 808nm / 1064nm) igwe laser diode na-eji ogologo ntụgharị 3 kachasị dị irè maka iwepụ ntutu isi, nke ọ bụla na-elekwasị anya na usoro dị iche iche n'ime ntutu isi, akụkụ dị n'ime ntutu; ihe mgbaru ọsọ anatomical bụ isi gụnyere bulge, bulb na papilla.
Ngwurugwu na-ewepu ntutu nke na-ejikọ ọrụ kachasị na nkasi obi na-enweghị atụ. N'ihi nnukwu ntụpọ ya na usoro dị jụụ dị elu, ọgwụgwọ dị ugbu a karịa ọsọ ọsọ na enweghị ihe mgbu - na-enye ihe ngwọta dị mma maka ndị ọrịa na ndị ọkachamara. Sano Diode Laser na-eme ka elele nke ogologo ogologo abụọ dị ogologo, yana ahụmịhe nke onye ọrịa ka mma yana usoro azụmaahịa, na -emepụta ihe ọhụụ pụrụ iche na nsonaazụ ọhụụ na ụwa nke mwepụ ntutu isi ọkachamara.
Njirimara nke igwe diode laser iwepu igwe:
• A vasatail laser wepụ ntutu usoro maka akpụkpọ ụdị m-IV. 808nm a na-etinye ogologo ntụgharị nke melanin n'ụzọ kachasị dị irè na ntutu ntutu na textures kachasị sara mbara
• Ngwọta ntutu kachasị mma, usoro dị jụụ dị ike na-eme ka ọgwụgwọ na-enweghị mgbu
• Oru oma nnyefe, 3-4 ugboro ume mgbanwe karịa omenala diode laser
Usoro ọgwụgwọ anyị dị mfe ga-ebibi ntutu ntutu ndị ahụ na nkeji nkeji. Ga-echekwa oge, ego, ị ga - echekwa onwe gị site na ndụ gị. Kpọrọ. Ndị ọkachamara ahụike na ndị nọọsụ ejirila usoro nke iwepụ ntutu laser wee kwụ ya n'azụ dị ka otu n'ime ụzọ kachasị mma iji kpochapụ ntutu ahụ maka ihe ọma. E kwuwerị, ha emeela ihe karịrị nde ọgwụgwọ isii.
1.755nm / 808nm / 1064nm 3 wavelength na 1, kwesịrị ekwesị maka ụdị na agba niile.
2. Nnukwu na nkwụsi ike laser na kachasị diode laser iji hụ na nsonaazụ ntutu.
3.N'ụzọ na-enweghị ihe mgbu kpọtụrụ na sapphire nke Real -16 ° C na-enweghị atụ nkasi obi, na nchekwa.
4.Full-agba ihuenyo mmetụ na elu kensinammuo na ọrụ enyi na enyi UI
5.Water + Air + Semiconductor TEC multifunction jụrụ usoro, nke bụ karịa gburugburu ebe obibi enyi na-enweghị Freon ma mma kwadoro.
6.high laser ike njupụta mmepụta ruo 120J / cm²
7. Ike. Oke arụmọrụ iji nweta kefriza na enweghi mgbu ntutu mwepụ ọgwụgwọ.
8.Mgbe akwụkwọ. German-diode laser Unit, nde 20 gbaa ma ọ bụ akwụkwọ ikike afọ abụọ
9.Pain-free. Ọnụ nke aka aka na-ajụ oyi ruo -16 ℃, na-eme ka ọgwụgwọ dị mma ma dị irè.
10.Ọmasị. Na-arụ ọrụ na-enweghị nkwụsị 24 na-enweghị nkwụsị na-arụ ọrụ, na-abawanye uru maka ụlọ ọgwụ, salons na ụlọ ọgwụ.
Nke gara aga: Akwara Building Ọkụ Abụba magshape igwe
Osote: EMSCULPT akwara ụlọ na ahụ slimming Machine
Sano P-808 diode laser 808nm ntutu mwepụ igwe
Portable 1200w 808nm Diode Laser Hair mwepụ M ...
Co2 Fractional Laser Machine, Ems Akwara mkpali Machine, otutu mwepụ mwepụ, Shr Ipl Opt, Shr Opt Ipl Nwepu Ntutu, Ọrịa Co2 Laser,